Part time Internet Jobs for Everyone. Earn money online by data entry jobs - MYSTERY ZILLION
oscarboy25 January 2012 edited January 2012 in Job Vacancy Are you looking for work from Home part time jobs? Home based typing jobs are now being offered by many Companies! Receive your paychecks every month! Full training provided by the company itself. No Selling Required. Please visit the website. http://www.earnparttimejobs.com/index.php?id=3844499ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ရနေပြီဗျာ ... B-) image hosting jpeg Tagged:
zarnilee January 2012 Registered Users သူ​တို့​ website ထဲ​ဝင်​ကြည့်​တော့​ paypal က​နေ​ ပိုက်​ဆံ​ပေး​မှာ​ပြော​တယ်။​ကျွန်​တော်​တို့​ဒီ​က​(မြန်​မာ​)က​နေ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ့​မ​လား​ဗျ။​စမ်း​ကြည့်​ပြီး​ပြီ​လား။​ Aungphowai January 2012 Registered Users zarnilee said:သူ​တို့​ website ထဲ​ဝင်​ကြည့်​တော့​ paypal က​နေ​ ပိုက်​ဆံ​ပေး​မှာ​ပြော​တယ်။​ကျွန်​တော်​တို့​ဒီ​က​(မြန်​မာ​)က​နေ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ့​မ​လား​ဗျ။​စမ်း​ကြည့်​ပြီး​ပြီ​လား။​
မှန်ပါတယ်။ paypal နဲ့ဆို အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျ။ မြန်မာဘဏ် ငွေလွဲ နဲ့ဆို အဆင်ပြေနိုင်တယ်။ .... oscarboy25 January 2012 Registered Users i think if u have foreign fri u can accecpt money... oscarboy25 January 2012 Registered Users ကျွန်တော်လဲမြန်မာကပါဘဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာကတော့ နိုင်ငံခြားကသူငယ်ချင်းကိုအကူအညီတောင်းပြီး Paypal OR Visa အကောင့်သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းထားမယ်အချိန်တန်လို့ $ များလာရင်ထုတ်ခိုင်းပြီးပို့ခိုင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ CalmHill January 2012 edited January 2012 Administrators ရေးထားတာကို အခုမှသတိထားမိလို့ ဝင်ပြောတာပါ အဲဒီ့ဆိုက်တွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ ပိုက်ဆံတကယ်လည်းမရပါဘူး မြန်မာပြည်ကနေ သုံးနေတာဆိုရင် ပိုပြီးတော့ နှမျောစရာကောင်းပါတယ် အချိန်လည်းကုန်တယ် ဆိုက်တက်လာဖို့လည်း စိတ်ရှည်လိုက်ရတယ် ပိုက်ဆံလည်းကုန်သွားပါတယ်။ :Dအဲဒီ့လိုဆိုက်တွေက အဓိကက Information တွေကိုရောင်းစားဖို့အတွက် လုပ်ထားတာပါ လာတဲ့လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးမယ်ပြောတယ် လူများများ Invite လုပ်ရင် ပိုက်ဆံပိုရမယ်ပြောတယ် ပြီးရင်တော့ Register လုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ Email စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ Information တွေကိုရောင်းစားတာပါ အဲဒီတော့ ကိုယ့် Email ဟာ Spam Mail ပို့တဲ့လူတွေထဲ ရောက်သွားရင် Spam တွေရောက်လာမယ် ကြော်ငြာတွေ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မက အသက် ၂၁ နှစ်ပါ ရှင့်ဓာတ်ပုံကို Social Network တစ်ခုပေါ်ကတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားလို့ပါတို့ အဲလိုစာတွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကိုပါ ထပ်ပြီးတော့ Reply ပြန်မိရင်တော့ ဘယ်တော့မှမဆုံးတော့ပါဘူး။ :D(မလိုအပ်ပဲ မင်ဘာချင်း ပြဿနာ မဖြစ်စေချင်လို့ Post နှစ်ခု ဖျက်ထားပါတယ်) oscarboy25 January 2012 Registered Users CalmHill said:ရေးထားတာကို အခုမှသတိထားမိလို့ ဝင်ပြောတာပါ အဲဒီ့ဆိုက်တွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ ပိုက်ဆံတကယ်လည်းမရပါဘူး မြန်မာပြည်ကနေ သုံးနေတာဆိုရင် ပိုပြီးတော့ နှမျောစရာကောင်းပါတယ် အချိန်လည်းကုန်တယ် ဆိုက်တက်လာဖို့လည်း စိတ်ရှည်လိုက်ရတယ် ပိုက်ဆံလည်းကုန်သွားပါတယ်။ :Dအဲဒီ့လိုဆိုက်တွေက အဓိကက Information တွေကိုရောင်းစားဖို့အတွက် လုပ်ထားတာပါ လာတဲ့လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးမယ်ပြောတယ် လူများများ Invite လုပ်ရင် ပိုက်ဆံပိုရမယ်ပြောတယ် ပြီးရင်တော့ Register လုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ Email စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ Information တွေကိုရောင်းစားတာပါ အဲဒီတော့ ကိုယ့် Email ဟာ Spam Mail ပို့တဲ့လူတွေထဲ ရောက်သွားရင် Spam တွေရောက်လာမယ် ကြော်ငြာတွေ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မက အသက် ၂၁ နှစ်ပါ ရှင့်ဓာတ်ပုံကို Social Network တစ်ခုပေါ်ကတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားလို့ပါတို့ အဲလိုစာတွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကိုပါ ထပ်ပြီးတော့ Reply ပြန်မိရင်တော့ ဘယ်တော့မှမဆုံးတော့ပါဘူး။ :D(မလိုအပ်ပဲ မင်ဘာချင်း ပြဿနာ မဖြစ်စေချင်လို့ Post နှစ်ခု ဖျက်ထားပါတယ်)
ဟုတ်ကဲ့အခုလိုသတိပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲဆိုဒ်ကိုစစ်ကြည့်တော့ အတုဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်။ ကျွန်တော်ဆက်မလုပ်တော့ပါဘူး။ မင်ဘာချင်းလဲပြဿနာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာ။ တစ်ဖက်လူကရင့်ရင့်သီးသီး ပို့စ်တင်ထားလို့ ပြန်ပြင်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီပို့စ်တစ်ခုလုံးကိုပါပြန်ဖျက်ပေးလို့ရမလား။ မလိုအပ်ဘဲသူများတွေကိုပါအလုပ်မများစေချင်လို့ပါ။ Morris January 2012 Moderators ဖျက်တော့မဖျက်ပါနဲ့ဗျာ။ နောက်လူတွေလည်း ဒီလိုကြုံရင် အတွေ့အကြုံရတာပေါ့။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla